Printing Materials & Equipments
Vinyl & Sticker Printing Services
Items 1 to 16 of 12 total
Graphtec Vinyl cutter Plotter
Graphtec vinyl cutting plotters are designed to meet the demanding requirements of design professionals in packaging design, vinyl sign graphics, garment and apparel, Rhinestone templates, automotive aftermarket styling, automotive protection, monument builders and manufacturing design related industries. Graphtec hasadiverse line of roll-feed and flatbed cutting plotters can accommodate any size project, large or small.The Graphtec professional class of CE6000 vinyl cutting plotters update the extremely successful CE5000 series with improved features. The CE6000 series vinyl cutter is also cleaner, &quot;greener&quot; with an electronic design and manufacturing process that minimizes the environmental impact of the hardware equipment throughout its entire life cycle.
Colour Multifunctionals MP C2003SP
Allowafresh blast of productivity to sweep through your office with Ricoh&#039;s new-generation flagship A3 colour MFD. Improve your workflow with its internal finisher, stapleless stapler and smart card reader. Save time with its short warm-up, fast first print speed, ID Card Copy and Searchable PDF. At the same time, reduce your environmental impact throughalow power consumption, quota setting and adjustable power on/off settings. In short, the MP C2003SP will meet all your digital workflow needs and help you become more productive, in an environmentally responsible manner.
<p>- HP Black and White Printer ထဲမှာမှ Print, Copy, Scan သုံးမျိုးလုံးကို A3 Size ထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Printer ကိုရှာနေတဲ့ လူကြီးမင်းတို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်ပါရစေ..</p><p>- HP LaserJet Pro MFP M436n ဟာဆိုရင် Print, Copy, Scan သုံးမျိုးလုံးကို A3 Size ထိအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့  ရုံးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောစရာမလိုအောင်လွယ်ကူလျင်မြန်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..</p><p>✔️Print Speed တစ်မိနစ်ကို ၂၃ရွက်ထိထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း</p><p>✔️Memory 128MB ပါရှိခြင်း</p><p>✔️Maximum Paper Size A3 ထိအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် စာရွက်ရေတိုင်းကို တိကျပြတ်သားစွာနှင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်..</p><p><br></p><p>- မြန်ဆန်လွယ်ကူစိတ်ချသေချာတဲ့ HP LaserJet Pro MFP M436n ဟာ ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တင့်ပြီး Promotionလည်းရှိနေတော့အသုံးပြုသူ လူကြီးမင်းတို့ အကြိုက်တွေ့ စေမှာအမှန်ပါပဲခင်ဗျာ..</p><p>- HP LaserJet Pro MFP M436n ရဲ့ မူရင်းဈေးနှုန်းကတော့ ($850) မြန်မာငွေ ၁၂သိန်း ၉သောင်း ၀န်းကျင်ဖြစ်ပြီးတော့</p><p>- Promotion ဈေးနှုန်းကတော့ ($695) မြန်မာငွေ ၁၀သိန်း ၆သောင်း ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..</p><p>- ဒါ့အပြင်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် လက်ခကို ၁နှစ် အခမဲ့ Service လည်းရှိနေတော့ ဒီလောက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး နှစ်ခါမရဘူးနော်...</p><p>- Promotion ကာလကတော့ အခု ဇွန်လ(၁၅)ရက် အထိပဲဆိုတော့.....ကဲ...အခွင့်အရေးလေးရတုန်း လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးမခံပဲ အခုပဲ...ဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ...</p>
HP Printer 7740WF e-All-in-One
<p>- လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Printing Job များလုပ်ဆောင်ရာတွင် Multifuntional Colour (Print, Copy, Scan, Fax) လေးမျိုးလုံးကိုတစ်နေရာထဲမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနိုင်မယ့် အရည်အသွေးမြင့် Multifuntional Printer ကိုရှာနေတာလား??</p><p>ဒီလိုဆိုရင်တော့</p><p>- Auto Duplex(ကျောကပ်)လည်းရ၊ Colour (Print, Copy, Scan, Fax) ကိုတစ်နေရာထဲမှာအချိန်ကုန်လည်းသက်သာ၊ စာရွက်ရေများများထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ HP Printer 7740WF e-All-in-One လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ..</p><p>✔️ Maximum Paper Size A4, Legal, A3 size ထိအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ Black and White ကိုတစ်မိနစ်လျှင် ၂၂ရွက်၊ Colour ကိုတစ်မိနစ်လျှင် ၁၈ရွက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..</p><p>✔️ Mobile Printing, Wireless Capability Feature ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလျင်လိုတဲ့ကိစ္စတာဝန်များကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှာပဲဖြစ်တဲ့အပြင် Resolution 1200x1200dpi နှင့် Color တစ်ရွက်ထုတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်မှာ Laser Color Printer များထက် အများဆုံး ၅၀% ပိုမို သက်သာစေပါတယ်။</p><p>- အမြန်နှုန်း နှင့် တိကျပြတ်သားမှုကို အလိုရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် HP Thermal InkJet 7740WF ဟာ ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တင့်ပြီး Promotion လည်းရှိနေတော့အသုံးပြုသူ လူကြီးမင်းတို့ အကြိုက်တွေ့ စေမှာအမှန်ပါပဲခင်ဗျာ..</p><p>- HP Thermal InkJet 7740WF ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ ($310) မြန်မာငွေ ၄သိန်း ၆သောင်း ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..</p><p>- ဒါ့အပြင်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် လက်ခကို ၁နှစ် အခမဲ့ Service လည်းရှိနေတော့ ဒီလောက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး နှစ်ခါမရဘူးနော်...</p><p>- Promotion ကာလကတော့ အခု ဇွန်လ(၁၅)ရက် အထိပဲဆိုတော့.....ကဲ...အခွင့်အရေးလေးရတုန်း လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးမခံပဲ အခုပဲ...ဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။။။</p>
HP Laser Printer M130fw
<p>- လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Printing Job များလုပ်ဆောင်ရာတွင် Multifunction(Print /Copy /Scan) ရတဲ့ Printer ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့.....</p><p>- HP Laser Printer M130fw စက်အသင့်ရှိနေပြီနော်...</p><p>- Black &amp; White Printer ဖြစ်တဲ့ M130fw စက်ဟာဆိုရင် တစ်မိနစ်လျှင်စာရွက်ရေ ၂၃ရွက်ထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်ရှင်..</p><p>- Multifunction (Print / Copy / Scan / Fax) ရတဲ့အပြင် HP Smart Mobile Application ဖြင့် ဖုန်းမှတစ်ဆင့် Print / Scan ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Feature လည်း ပါဝင်တာကြောင့် အလျင်လိုတဲ့ တာဝန်ကိစ္စများကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်.</p><p>- Maximum Paper Size A4, Legal ထိထုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်..</p><p>- ဒါ့အပြင်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် လက်ခကို ၁နှစ် အခမဲ့ Service လည်းရှိနေတော့ ဒီလောက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး နှစ်ခါမရဘူးနော်...</p><p>- Promotion ကာလကတော့ အခု ဇွန်လ(၁၅)ရက် အထိပဲဆိုတော့.....ကဲ...အခွင့်အရေးလေးရတုန်း လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးမခံပဲ အခုပဲ...ဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင့်...</p>
HP Printer IA3835
<p>- ရုံး နှင့် အိမ်တွင်း လုပ်ငန်းခွင်တို့မှာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျစ်လစ်ပြီး High-quality Print/Scan/Copy များကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ Printer တစ်လုံးရှာနေရင်တော့ HP ရဲ့ Deskjet Ink Advantage 3835 ကိုသတိရလိုက်ပါရှင်..</p><p>- B/W ဆိုရင် တစ်မိနစ်လျှင် ၈ရွက် ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး Color ဆိုရင်တော့ တစ်မိနစ်လျှင် ၆ရွက်ထိထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်..</p><p>- Multifunction (Print / Copy / Scan / Fax) ရတဲ့အပြင် HP Smart Mobile Application ဖြင့် ဖုန်းမှတစ်ဆင့် Print / Scan ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Feature လည်း ပါဝင်တာကြောင့် အလျင်လိုတဲ့ တာဝန်ကိစ္စများကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်..</p><p>- အသုံးပြုထားတဲ့ HP 680 Cartridge မှာလည်း Black ဆိုရင် အများဆုံး အရွက်ရေ ၄၈၀ ခန့် နှင့် Tri-color ဆိုရင် အများဆုံး အရွက်ရေ ၁၅၀ခန့်အထိ ထုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်...</p><p>- ဒါ့အပြင်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် လက်ခကို ၁နှစ် အခမဲ့ Service လည်းရှိနေတော့ ဒီလောက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး နှစ်ခါမရဘူးနော်...</p><p>- Promotion ကာလကတော့ အခု ဇွန်လ(၁၅)ရက် အထိပဲဆိုတော့.....ကဲ...အခွင့်အရေးလေးရတုန်း လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးမခံပဲ အခုပဲ...ဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင့်...</p>
Multifunction Copier (Upto A3) MFP HP 436dna
<p>- HP Multifunction A3 Copier စက်တစ်လုံးဝယ်ရုံနဲ့&nbsp; စာရွက်ရေ 10,000 နီးပါးထုတ်နိုင်တဲ့ အလန်းစား Promotion လာပြီနော်...</p><p><br></p><p>- ကျောကပ် Print / Copy / Scan - Multifunction သုံးလို့ရတဲ့ အပြင် Network ပါချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရနိုင်သော HP Black &amp; White Copier စက် HP 436dna ကို ယခင်ဈေးနှုန်း $ 1,390 မှ Promotion Price $1,050 အထိ Promotion ချထားသည့်အပြင် Toner ၁ ချောင်း Free ပေးမှာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်...</p><p><br></p><p>- ဒါ့အပြင်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် လက်ခကို ၂နှစ်အခမဲ့ Service ပေးမှာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်...</p><p><br></p><p>- ဒီလောက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး နှစ်ခါမရဘူးနော်....</p><p><br></p><p>- Promotion ကာလကတော့ အခု ဇွန်လ(၁၅)ရက် အထိပဲဆိုတော့.....ကဲ...အခွင့်အရေးလေးရတုန်း လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးမခံပဲ အခုပဲ...ဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင့်...</p><p><br></p><p>- ဒါ့အပြင်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ပစ္စည်းနှင့် လက်ခကို ၁နှစ် အခမဲ့ Service လည်းရှိနေတော့ ဒီလောက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး နှစ်ခါမရဘူးနော်...</p><p><br></p><p>- Promotion ကာလကတော့ အခု ဇွန်လ(၁၅)ရက် အထိပဲဆိုတော့.....ကဲ...အခွင့်အရေးလေးရတုန်း လက်လွှတ်အဆုံးအရှုံးမခံပဲ အခုပဲ...ဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင့်...</p>
Bigger savings and smarter design with Refill Tank System that offers ultra-high 6000 page-yield# for black ink. Optimize work productivity with automatic document feeder and wireless networking capability. #Refers to black ink. Color ink: 5000 page-yield. Approx. yields are extrapolated based on Brother original methodology using Test Patterns ISO/IEC 24712. Approx. yields are not based on ISO/IEC 24711.
No matter how hectic your day is - the reliable Toshiba technology incorporated in this A3 system ensures hassle-free handling and intuitive usage when you need it most. A modern A3 system which covers the basic needs of modern businesses. Based on sophisticated technology the e-STUDIO2303AM easily integrate into networks and is intuitve to use. Designed to meet the highest environmental standards, this model helps save valuable resources.
DocuPrint CP305dရုံးသုံးမိတ္တူစက်သည် လေဆာပရင်တာနှင့်တူ လွယ်ကူစွာထုတ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်သင့်တော်သော မိတ္တူစက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ DocuPrint CP305 သည်အသုံးပြုရတာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ပုံနှိပ်စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုမည် ဆိုလျှင် Fuji Xerox အမှတ်တံဆိပ်က စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူအားပေးလိုသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များအတွက် Concordia Myanmar Co.Ltd တွင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။Convenient efficiency and productivity is easy with the new DocuPrint CP305dA4 Colour laser printer. It isareliable, high-quality machine especially designed to meet the documentation needs of small to medium businesses. Remarkably simple to use, the new DocuPrint CP305dempowers any office with outstanding print performance.
ထင်းရှူးသစ်သားထွင်း ဖိတ်စာ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ပြယုပ်အတွက် လူကြီးမင်းရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်အတိုင်း အကောင်းအထည်ဖော်နိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့မှ သစ်သား။ ထင်းရှူးသား။ အထပ်သား။ ကြိတ်သား။ အစရှိသည်တို့ဖြင့် အနုပညာလက်ရာမြောက်ဒီဇိုင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ထင်းရှုးသစ်သားဖြင့် ဝိုင်စည်ပိုင်း ထိပ်ပိတ်ဒီဇိုင်းများ လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Myanmar 's largest B2B marketplace for Office Supplies &amp; Service in Myanmar. You can buy and sell office supplies such as Printing Service,Printer,Projector &amp; Stand,Office Stationery,Indoor Plants,Vinyl &amp; Sticker Printing Service and Software &amp; Web Development in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories.Many suppliers will send you quotations. You just sellect the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.Thanks for interest in BaganMart.com.